I-TOKYO OTA OPERA PROJECT2020 | Umbutho Wokukhuthaza Inkcubeko kwiWadi
Iprojekti yeTokyo Ota OPERA>
Iprojekti yeTokyo Ota OPERA2020
Umbutho wokukhuthaza inkcubeko kwiwadi ye-Ota uqhuba iprojekti yeminyaka emithathu ye-opera ukusukela ngo-2019.
Kunyaka wesibini, siza kugxila kwi <vocal music>, ekwangumbindi we-opera, kunye nokuphucula izakhono zokucula.Siza kucela umngeni nakwezolwimi lwantlandlolo lweopera nganye (isiTaliyane, isiFrentshi, isiJamani)Kwinkqubo yokwenyani, kunye neemvumi ezithandwayo zeopera, siza kucula kunye nesandi seokhestra kwiholo enkulu yeAplico.
Sijonge phambili ekuthatheni inxaxheba kwabo bafuna ukonwabela umhlaba we-opera nzulu.
* Ukusebenza kuye kwarhoxiswa ukunqanda usulelo olutsha lwe-coronavirus.Ishishini litshintshelwe ekuhanjisweni kwe-Intanethi.
Cofa apha ufumane iphetshana lePDF
Umququzeleli: Umbutho wokuKhuthaza iNkcubeko yeWadi yeOta
Isibonelelo: Isiseko esiDibeneyo sokuDalwa kwengingqi
Intsebenziswano kwimveliso: iToji Art Garden Co., Ltd.
I-TOKYO OTA OPERA PROJECT + @ IKHAYA
"I-TOKYO OTA OPERA PROJECT + @ IKHAYA" yiprojekthi ye-opera eyenzelwe indlela yokuphila entsha.
Ukusebenza kwahlehliselwa ku-2021 ukuthintela usulelo olutsha lwe-coronavirus, kodwa iikhosi ze-Intanethi (amaxesha ali-12 ewonke) abanjelwa amalungu eekwayara.
Ukongeza, kumnqweno wokuhambisa ii-opera arias ezintle kuye wonke umntu ngevidiyo, siza kuzisa i-opera (petit) gala ikonsathi ngentsebenziswano yabadlali beemvumi ezimbini kunye nabadlali bepiyano ababecwangciselwe ukubonakala kulo nyaka.
Nceda wonwabe!Ividiyo iya kuhlaziywa amaxesha ngamaxesha!
I-Opera (Petit) Gala Concert (iingoma ezi-5 xa zizonke) (Ikhutshwe nge-2020 kaNovemba ngo-11)
U-EW Korngold: Ukusuka kwi-opera "IsiXeko sokuFa" "Ukulangazelela kwam, ukuzikhohlisa ngamaphupha (ingoma kaPierrot)" (ekhutshwe ngo-Novemba 2020, 11)
G. Bizay: "Habanera" ukusuka kwi-opera "uCarmen" (ikhutshwe ngo-Novemba 2020, 11)
GA Rossini: "Ndim lowo" opera "I-Barber yaseSeville" (ikhutshwe ngoNovemba 2020, 11)
J. Strauss II: "Ndiyathanda ukumema abathengi" kumsebenzisi "Die Fledermaus" (ekhutshwe ngo-Novemba 2020, 11)
UMozart: "U-Oira ngumgibe wentaka" opera "Umlingo uMlingo" (ukhutshwe nge-2020 ka-Okthobha ka-10)
[Izifundo ezi-3] Uhambo oluya kwimfuno ye-opera
Ukuphendula imeko yongxamiseko ekhutshwe nge-3 kaJanuwari, unyaka we-1 kaReiwa kunye nesicelo esivela kwi-Ota Ward, le khosi iya kutshintsha ixesha lokuqalisa njl.
Qala (vula) XNUMX:XNUMX (XNUMX:XNUMX) Ixesha elicwangcisiweyo lokuphela XNUMX:XNUMX
* Inani labatyeleli kule khosi lilinganiselwe kwi-XNUMX% yamandla, kwaye liya kubanjwa ngamaxesha ezihlalo.
* Imirhumo yetikiti iya kubuyiselwa kwabo banqwenela ngenxa yeenguqu kwixesha lokuqala.Abathengi bamatikiti bazokwaziswa ngeenkcukacha nge-imeyile okanye kwimvulophu.
Yaqala njani i-opera kwaye yaphuhla njani?
Le khosi apho unokufumana ulwazi olutsha lwe "opera" kunye "nobugcisa" ngokujongela kwinkcubeko yaseYurophu nakwinkcubeko yaseViennese, eyavela kwiiopereta.
Umfundisi-ntsapho uya kuba nguToshihiko Uraku, oza kutyhila umhlaba wobugcisa kwimbono enomdla, enje "Kutheni uFranz edwelise amabhinqa atyhafileyo?
© Thatha i-Niitsubo
Umbhali, umvelisi wobugcisa benkcubeko.Iyasebenza njengomvelisi wezobugcisa kwinkcubeko eseParis.Emva kokubuyela eJapan, emva kokusebenza njengomlawuli ophetheyo weShirakawa Hall, Shirakawa Hall, ngoku ngummeli weofisi kaToshihiko Uraku.Imisebenzi yakhe yahlukile, kubandakanya nomlawuli omele i-European Japanese Art Foundation, intloko yeDaikanyama future Music School, umlawuli womculo weSalamanca Hall, kunye nomcebisi wezenkcubeko weSixeko saseMishima.Iincwadi zakhe zibandakanya "Kutheni uFranz Liszt Abafazi Abatyhafileyo", "uViolinist obizwa ngokuba nguMtyholi" (Shinchosha), kunye "nembali yoMculo ye-138 yezigidi zeminyaka" (i-Kodansha). NgoJuni 2020, ingxelo yaseKorea "Kutheni uFranz Liszt-Kutheni uFranz Liszt-Ukuzalwa kwePianist" yapapashwa eMzantsi Korea.
Iphepha lasekhaya elisemthethweni
Umxholo wesifundo [Indawo / iOta yeHolo yeWadi / iAprico iHolo encinci
1 "Ukuphonononga imbali yeopera"
Umhla wokuqala / ngoJanuwari 2021, 1 (ngolwesiHlanu)　19:00 ukuqala (18:30 ivuliwe)　17:30 ukuqala (17:00 ivuliwe)
Imbali yeopera yayingaphezulu nje kwembali yomdlalo weqonga. I-Opera, ebizwa ngokuba yi-etymology "ngumsebenzi," luphawu lobukhosi kunye namandla, kwaye ikwangumsebenzi wenkcubeko yaseNtshona enje ngoncwadi, ubugcisa, uyilo kunye neqonga.Siza kuzisa imbali yeopera, ekunokuthiwa yimbali yeYurophu ngokwayo, ngendlela eqondakala ngokulula nangendlela eqinileyo.
2nd "Ngaphambili nangasemva kweNkcubeko yaseYurophu entle"
Umhla wokuqala / ngoJanuwari 2021, 2 (ngolwesiHlanu)　19:00 ukuqala (18:30 ivuliwe)　17:30 ukuqala (17:00 ivuliwe)
Ukuba i-opera yenkundla entle yeBhotwe laseVersailles yayiyinkcubeko yangaphambili, ngaba ibhotwe alinakuba nayo indlu yangasese?Kunokuthiwa yinkcubeko emva kwezigcawu.Ngaba i-Phantom ye-Opera eyashukumisa isixeko yayinyani?Kule ngxaki, siza kukwazisa ngembali emangazayo yenkcubeko yaseYurophu yangasemva.
I-3 "Imfihlakalo yenkcubeko yaseViennese?"
Umhla wokuqala / ngoJanuwari 2021, 3 (ngolwesiHlanu)　19:00 ukuqala (18:30 ivuliwe)　17:30 ukuqala (17:00 ivuliwe)
Kutheni le nto iVienna yabizwa ngokuba sisiXeko soMculo?Yintoni enomtsalane eVienna ethe yatsala iimvumi ezinkulu njengemagnethi?Kwaye ithini imvelaphi yokuzalwa kwe-opera enomdla eyahlukileyo kwesi sixeko sibizwa ngokuba yiWinna Operetta?Yimfihlakalo yenkcubeko enemibala emihle yaseViennese.
Abathengi abanqwenela ukuya kwindawo leyo
Umhla wokuthengiswa kwangaphambili kwe-Intanethi: nge-12 kaDisemba (ngeSat) nge-12: 12 ~
Umhla wokukhutshwa gabalala: nge-12 kaDisemba (ngolwesithathu) ngo-16: 10 ~
Indlela yokuthenga itikitiAphaNceda ujonge kwi.
Zonke izihlalo ezigcinwe * Abafundanga abavumelekanga
Itikiti lexesha elinye i-yen ye-1 (ixabiso elikwi-Intanethi: i-1,000 yen)
Ixesha elibekiwe elitikiti le-3 yen (ixabiso elikwi-Intanethi: i-2,700 yen)
Abathengi abanqwenela ukuya kwiirekhodi ezirekhodiweyo
Isaziso sotshintsho kusasazo lwangoku kunye neendlela zokubukela, njl.
Le khosi ibicwangciselwe ukuba ihanjiswe ngqo ngosuku lokuvula, kodwa ngenxa yeemeko ezahlukeneyo, sigqibe ekubeni siyitshintshe ibe kukurekhoda ukuhanjiswa.
Siyaxolisa ngokungalunganga, kodwa nceda ujonge oku kulandelayo malunga nendlela yokuthenga kunye nomhla wokukhutshwa.
Cofa apha ukurekhoda bukhoma kunye nokusasazwa
Iprojekti yeTokyo Ota OPERA2021
Iprojekti yeTokyo Ota OPERA2019